चियापत्तीलाइ पुन प्रयोग गर्ने उपायहरु - HamroBuzz
चियापत्ती एकचोटी प्रयोग गरेपछि फाल्ने गर्नु भएको छ ? अब देखि नफाल्नुस !
चियापत्ती एकचोटी प्रयोग गरेपछि फाल्ने गर्नु भएको छ ? अब देखि नफाल्नुस ! किनकि आज हामी तपाईलाई प्रयोग भैसकेको चियापत्तिलाई कसरि पुन प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी गराउदै छौ।
तपाई प्रयोग भैसकेको चियापत्तिलाई राम्रो संग धोएर कुनै कपडा मा पोको बनाएर आफ्नो जुत्ता वा घरको कुनै दुर्गन्धित कुनामा राख्न सक्नु हुन्छ। यसले दुर्गन्ध हटाउन मद्दत गर्दछ।
चियापत्ती/ टी- ब्याग लाइ मनतातो पानीमा निचोरनुस र उक्त पानीले कुल्ला गर्नुभयो भने दात मा हुने दुखाइ बाट राहत पाउन सक्नु हुन्छ। साथै उक्त पानीले घीउ वा तेलको भाडो सफा गर्दा दुर्गन्ध बाट छुटकारा पाउन सक्नु हुन्छ।
-घरको कुनै कुनामा यदि झिंगा बाट पिडित हुनुहुन्छ भने प्रयोग भैसकेको चियापत्ती लाइ धोएर सफा गर्नुस अनि त्यो कुनामा रगडि दिनूस झिंगा आउन कम हुन्छ
बचेको चियापत्तिलाई कपाल मा लगाउन पनि सक्नु हुन्छ यो एक प्रकारको प्राकृतिक कन्डिसनर हो र कपालको लागि धेरै नै लाभ् दायक हुन्छ चिया बनाएर बचेको चियापत्तिलाई धोएर फेरी एकचोटी उमाल्नुस छान्नुस र चिसो भएपछि त्यो पानि ले आफ्नो कपाल धुनुस तपाइको कपाल लाइ पक्कै पनि फाइदा पुग्नेछ।
घरमा काठका फर्निचर छन् र फिक्क हुदैछन भने चियापत्ती पानिले सफा गरेर चम्काउन सक्नु हुन्छ। यसको लागि तपाई ले चियापत्तिलाई पुन तातो पानि मा उमालेर चिसो पारि स्प्रे बोत्तलमा राखेर प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ। यसले तपाइको फर्निचर चम्किनेछ।
चियापत्तिलाई मल को रुप मा पनि प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ। गमला मा बिरुवा लाइ समय समय मा मल को जरुरत हुन्छजसको लागि तपाई ले बचेको चियापत्तिलाई मल को रुपमा गमला पनि हाल्न सक्नु हुन्छ तर मलको रुप मा प्रयोग गर्न पनि चियापत्तिलाई राम्रो संग धुन भने नबिर्सिनु होला ताकी तपाइको बिरुवा स्वस्थ रहुन।
-भरपुर एन्टी -अक्सिडेण्ट पाइने हुनाले चियापत्तिलाई सानो तिनो घाउ चोट मा पनि प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ चोटमा प्रयोग गर्नु अघि राम्रो संग धुन भने नबिर्सिनु होला।
हामीले प्रयोग भैसकेको भनेर फाल्ने धेरै चीज हरु अन्य काम को लागि पुन प्रयोग गर्न सक्छौ। पुन प्रयोग ले हाम्रो वातावरण सफा र स्वच्छ राख्न मद्दत मिल्छ त्यसैले सकेसम्म हरेक चीज लाइ पुन प्रयोग गरौ।
Previous article लामखुट्टे भगाउने सरल घरेलु उपायहरु
Next article आखाले बयान गर्छ तपाइको स्वास्थ्य